စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 9:31 AM
ဟီးးး ညီလေးက လျှောက်သွားရသေးတယ်နော်
အကိုက မသွားရဘူးလေ ...
ကြိုးတစ်လုံ စကပ်တိုတို ပုံလေးတွေရိုက်ခဲ့ဟ..ဦးလေးက ညံ့ပ..ဟိဟိ အဖမ်းခံရရင် နာမပါဝူးနော်
နောက်နှစ်တွေမှာတော. ချစ်သူနဲ.ပျှော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ ညီလေး။
ဟဟ အစ်ကိုကတော့ ညီလေးကိုပြောသလိုပဲ.. အိပ်ယာထဲမှာ ဖျားနေတယ်ကွယ်.။ ချွဲစရာလူကလည်း
ဗယ်လင်မတိုင်းခင်နေ့က ချိတ်ကောက်သွားလို့ မချော့ရတေးဘူး..။
ပန်းလိုချင်ရင်စောစောပြောပါလားလို့.. ပန်းပို့ပေးမှာပေါ့..း)
ဒီကောင်လေးကြော်ငြာဝင်သွားတာပဲ ဟွန့် 
ရှားပါးတဲ့ ၁၀ကျပ်တန်တွေ တွေ့လိုက်ရတယ် ဟိဟိ
ကုသိုလ်ရတာပေါ့ မြှားနတ်မောင်တို့က :D
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်
မိုးလင်းကတည်းက ရောက်လာတဲ့ အလွမ်းတွေနဲ့
ကိုကျူုးပစ်ရေ . . . .
အေးဟ... ချစ်သူများနေ့တုန်းက ငါဘာလုပ်နေမိပါလိမ့်..။။
လူရှေ့သူရှေ့နမ်းပြတဲ့ ခေတ်တောင်ရောက်ရေပြီလား? ရောင်တော်ဖွင့်တာ သဘောကျမိတယ်။ :) ဘာပဲပြောပြော သူများတွေပျောနေချိန်မှာ ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့။